(tonga teto avy amin'ny Hebrew language)
Ny fiteny hebreo na fiteny hebrio dia fiteny semitika. Tenin'ny Jiosy io fiteny io. Teny fampiasan'ny Israelita nandritra ny fotoana nitrangan'ny tantara tao amin'ny Baiboly ny teny hebreo. Rehefa resin'i Babilôna i Jodà, dia nentina hatao sesitany tany Babilôna ny Jiosy ka nanomboka niteny aramaika na arameana. Tsy nampiasaina tamin'ny fiainana andavanandro intsony ny teny hebreo fa mbola fantatry ny Jiosy mpanadihady Soratra Masina ihany.
Nanan-kevitra ny hanao ny teny hebreo ho fiteny fampiasa indray ny Jiosy maro tamin'ny taonjato faha-20. Ary lasa tenin'ny firenen'i Israely tamin'ny 1948 ilay fiteny. Avy amin'ny toerana maro ny mponin'i Israely ka nanapa-kevitra ny hianatra hebreo avokoa izy ireo mba hiteny fiteny iray ihany. Ny fikambanana mifehy ny fampiasana ny teny hebreo dia ny Akademian'ny Fiteny Hebreo.
1 Fivoaran'ny fiteny hebreo
1.4 Ny fiteny hebreon'ny Andro Antenantenany
Fivoaran'ny fiteny hebreo[hanova | hanova ny fango]
Hatramin'ny niforonany dia tsy nitsaha-nivoatra ny fiteny hebreo ka tao ny hebreo biblika, ny hebreo misnika (na misnaika), ny hebreon'ny Andro Antenantenany ary ny hebreo vaovao.
Ireo Taratasin'i Amarna na Taratasin'i Tel-Amarna dia taratasim-pifandraisana ara-diplômasia egiptiana tamin'ny taonjato faha-13 tal. J.K. Ny sasany amin'ireo taratasy ireo dia avy any Kanaana. Voasoratra amin'ny fiteny akadiana izy ireo. Hita anefa fa misy fitoviana amin'ny fiteny hebreo nanoratana ny Tôrah ny vontoatin'izy ireo ka midika izany fa nisy fitenim-paritra prôtô-hebreo izay notenenina tao Kanaana talohan'ny niorenan'ny vahoaka
Hebreo fonenana tao. Ireo taratasy ireo anefa tsy miresaka momba ny Hebreo fa ny amin'ny atao hoe Apiro izay tsy tena fantatra mazava nefa misy mampifadray azy amin'ny Hebreo.
Ankoatr'ireo zavatra momba ny fiteny ireo dia tsy fantatra mazava tsara ny tena endrik'ilay na ireo fiteny atao hoe prôtô-hebreo ireo. Ny azo tenenina dia izao: ireo fitenim-paritra tranain'i Fenisia (Libàna amin'izao fotoana izao) izay fantatra dia misy iovizana amin'ny fiteny hebreo tranainy ka azo atao ny milaza fa fisehon'ny fiteny iray arakaraka ny faritra itenenana azy izy ireo, izay mety notenenina tany amin'ny morontsirakaôsiro-palestiniana.fiteny Ny hebreo biblika dia avy amin'ireo fitenim-paritra ireo.
Tamin'ny volana Jolay 2008 tamin'ny soso-nofon-tany mifandraika amin'ny taona 1050 - 970 tal. J.K. no nahitana ny Ostracon an'i Khirbet Qeiyafa izay mety ho soratra hebreo tranainy indrindra tao amin'ny toeram-pangadiana arkeôlôjikan'i Khirbet Qeiyafa, tanàna kely tamin'ny Andron'ny Vy II A.
Fiteny velona ilay atao hoe hebreo biblika teo anelanelan'ny taonjato faha-12 sy faha-2 tal. J.K. Mety nifanahaka amin'ny fiteny fenisiana izy tamin'izany satria mifanakaiky ireo fiteny roa ireo. Ny fiteny hebreo no nanoratana ny Baiboly hebreo (תַּנַ"ךְ / Tanakh). Toraka izany koa ireo soratanana hita tao Komràno teo anelanelan'ny taona 1947 sy 1956. Ny ankamaron’ireo boky apôkrifan'ny Baiboly anefa dia tamin'ny fiteny arameana.
Ao amin’ny Baiboly, indrindra ao amin'ny boky voalohany, ny Genesisy (amin'ny teny hebreo: בְּרֵאשִׁית / Bereshit), dia ahitana ny soratra hoe אברם העברי (Abram ha-’ibri izay midika hoe "Abrama ilay Hebreo") nefa tsy milaza io lahatsoratra io fa niteny hebreo i Abrama na ny taranany. Ny teny hoe hebreo na hebrio dia mety avy amin'ny fitenenana hoe מעבר לנהר / me-’eber la-nahar ("avy eny am-pitan'ny ony"), izay manondro ny fiavian'i Abrahama. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-3 tal. J.K. dia nampiasa ny fiteny arameana ny Jiosy tao Palestina tamin'ny fiainany andavanandro sy tamin'ireo literatiora ivelan'ny fivavahana.
Fiteny ampiasaina amin'ny fivavahana izao ny hebreo biblika ka hafa fa tsy mitovy amin'izay tenenin'ny vahoaka israeliana ankehitriny. Tsy ampy voambolana ny fiteny hebreo biblika izay tsy ahitana afa-tsy voanteny latsaky ny 8 000 ka ny 2 000 dia voanteny tsy miseho ao amin'ny Baiboly hebreo afa-tsy indray mandeha monja, ary ireo teny ireo dia voaforona tamin'ny fototeny miisa 500. Ny voanteny grika tamin'izany fotoana izany anefa dia efa nahatratra 120 000 isa. Azo antoka fa nisy voanteny hafa maro kokoa nampiasain'ny vahoaka ho fanampin'izay hita ao amin'ny Tanakh nefa nanjavona izany.
Ity endriky ny fiteny hebreo iray ity dia mifanandrify amin'ny fotoana feran'ny taonjato volohany sy faha-5 taor. J.K. izay mifanandrify koa amin'ny fotoan'ny Talmoda (taonjato faha-2 hatramin’ny faha-5). Atao hoe "hebreo rabinika" na "fitenin'ny Olonkendry" koa ity fiteny ity.
Fiteny velona nampiasaina tamin'ny fiainana andavanandro sy tao amin'ny literatiora jiosy izy io, araka ny hita amin'ireo tahirin-tsoratra hitan'ireo arkeologa tao Israely. I Abraham Geiger no nanomboka nanao fanadihadiana ara-kaifiteny tamin'izy ireo tamin'ny taona 1845.
Ny hebreo misnika (na misnaika) dia ahitana zava-baovao raha mitaha amin'ny hebreon'ny Baiboly izay taloha lavitra noho izy. Momba ny fandrafetana fehezanteny sy ny voambolana izany ka hita ireo teny nindramina tamin'ny fiteny nanjaka ara-politika na ara-kolontsaina tamin'izany fotoana izany, dia ny fiteny arameana sy grika ary persana.
Ny fiteny hebreon'ny Andro Antenantenany[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-10 dia tany ivelan'i Palestina any am-pielezana no nitohizan'ny fampiasana ny fiteny hebreo ka mandraka amin'ny nahaterahan'io fiteny io indray tao Israely tamin'ny taonjato faha-20.
Amin'ny fiainana andavanandro dia niteny ny fitenin'ny firenena nonenany ny Jiosy, ka tsy nampiasa ny fiteny hebreo afa-tsy tamin'ny sehatry ny fivavahana. Tamin'izany fiteny hebreo izany no nanatanterahan'ny Jiosy am-pielezana ny fivavahany sy amakiany ny Tôrah ary andinihany ireo hevi-teny isan-karazany amin'io boky masina io. Tamin'ny fiteny hebreo koa no nifandraisan'ireo olonkendry jiosy tamin'ny firenena samihafa. Hita araka ireo zava-bokarina ara-pivavahana sy ara-kolontsaina ary amin'ny tontolon'ny asa ireo ny fivoaran'ny fiteny hebreo nandritra ny fotoana lava.
Ny fiteny hebreo vaovao dia karazan'ny fiteny hebreo izay ampiasaina na am-bava na an-tsoratra nanomboka tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha-19. Miavaka izy satria lasa fiteny velona, notenenin'ireo Siônista aloha, avy eo nampiasain'ny ankamaroan'ny Israeliana, taorian'ny taonjato maro nahafaty ny fiteny hebreo sy naha fitenim-panompoam-pivavahana fotsiny azy. Nahazo aina toy ny nateraka indray ny fiteny hebreo tamin'ny taonjato faha-20 vokatry ny asan'i Eliezer Ben Yehudah tamin'ny andron'ny atao hoe Haskala (השכלה).
Révérend Docteur Charles Rakotoson, Gramera hebreo
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_hebreo&oldid=1011074"
Voaova farany tamin'ny 30 Aprily 2021 amin'ny 18:55 ity pejy ity.